Miverina amin'ny orinasa SAS miaraka amin'ny karama tsara kokoa
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Miverina amin'ny orinasa SAS miaraka amin'ny karama tsara kokoa
Nifanaiky i SAS sy ny mpanamory fiaramanidina. Ireo mpandeha matetika any Eoropa Avaratra dia faly mahita ireo fito andro mivoaka.
Ny fitsangatsanganana fito andro dia nahitana mihoatra ny roa isaky ny fiaingana telo. Sidina mihoatra ny 4,000 no tsy niasa mpandeha 350,000 nanjavona. Ny fikorontanana dia nahitana ny serivisy lavitra rehetra sy ny làlambe an-tsokosoko an-tsokosoko eo anelanelan'ny hub lehibe Skandinavia.
Na izany aza, antenaina ny fanakorontanana sasantsasany mandritra ny zoma satria mifindra monina manerana ny faritra ny fiaramanidina sy ny ekipa.
Ny harivan'iny alakamisy iny dia nanamafy ny faran'ny fitokonana tamin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety ny SAS taorian'ny fisaintsainana lalina efa ho roa andro.
Manome fiakarana karama 3.5% ny mpanamory amin'ny taona 2019, 3 isan-jato amin'ny 2020 ary 4 isan-jato amin'ny 2021. Nanazava ihany koa ny filoha jeneralin'ny SAS, Rickard Gustafson, fa ny fivarotana dia azo zahana amin'ny famaritana mialoha sy ny fahalalahana.
Tany am-piandohana dia nitaky fiakarana karama 13 isan-jato ny mpanamory mba hifaninana amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa.
Ny vola miditra very dia mitentina SAS $ 50 tapitrisa. Nahazo tombony ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka tamin'ny taona 2018 taorian'ny taona maro sarotra, ary zara raha nisoroka ny bankiropitra tamin'ny 2012.
Pitbull sy Mariah Carey hanasongadinana ny festival Jazz Curacao North Sea 2019
Centara Grand & Convention Center ao amin'ny CentralWorld Bangkok hanamafy ny maha-toerana malaza an'i MICE any Thailandy